Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koofurta Sudan oo deeq kala duwan ku wareejisay Dowladda Koofurta Sudan – Bandhiga
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koofurta Sudan oo deeq kala duwan ku wareejisay Dowladda Koofurta Sudan
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee K. Suudaan ayaa maanta waxa ay Dowladda South Sudan ku wareejisay 7 gaari oo ay ku raran tahay deeq mucaawino ah oo ka kooban Raashin kala duwan, maro kaneeco iyo bacaha roobka. Deeqdaan ayaa loogu talagalay in lagu caawiyo dadka fatahaadaha iyo roobabku ay barakiciyeen ama Saameyeen. Waxaa Munaasabad lagu wareejinayay deeqdaan kasoo qaybgalay madax ka socoto Doowladda South Sudan oo ay ka mid ahaayeen Madaxweyne Ku Xigeenka Waddanka, Wasiirka arrimaha Baarlamaanka ahna Xoghayahay Guud ee Xisbiga Talada haya iyo Wasiirka Warfaafinta. Sidoo kale waxaa kasoo qaybgalay Safiirka Safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay waddankaan iyo ganacsato Soomaaliyeed oo aad u farabadan oo uu horkacayay Guddoomiyaha Jaaliyadda Ganacsatada Soomaaliyeed ee K. Suudaan. Waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan Ganacsatada Soomaaliyeed ee qayb ka gaysatay hoowshaas wanaagga badan ee noo qabsoontay maanta.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee K. Suudaan ayaa maanta waxa ay Dowladda South Sudan ku wareejisay 7 gaari oo ay ku raran tahay deeq mucaawino ah oo ka kooban Raashin kala duwan, maro kaneeco iyo bacaha roobka.
Deeqdaan ayaa loogu talagalay in lagu caawiyo dadka fatahaadaha iyo roobabku ay barakiciyeen ama Saameyeen.Waxaa Munaasabad lagu wareejinayay deeqdaan kasoo qaybgalay madax ka socoto Doowladda South Sudan oo ay ka mid ahaayeen Madaxweyne Ku Xigeenka Waddanka, Wasiirka arrimaha Baarlamaanka ahna Xoghayahay Guud ee Xisbiga Talada haya iyo Wasiirka Warfaafinta.
Sidoo kale waxaa kasoo qaybgalay Safiirka Safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay waddankaan iyo ganacsato Soomaaliyeed oo aad u farabadan oo uu horkacayay Guddoomiyaha Jaaliyadda Ganacsatada Soomaaliyeed ee K. Suudaan.
Waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan Ganacsatada Soomaaliyeed ee qayb ka gaysatay hoowshaas wanaagga badan ee noo qabsoontay maanta.